सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च, इटहरी डुबानमा पर्यो ! - radionrn.com
सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च, इटहरी डुबानमा पर्यो !
लगातारको वर्षाका कारण सुनसरीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । तीन दिनदेखि लगातार परेको पानीका कारण इटहरीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा छ । इटहरीको बुढीखोला र ट्याङ्रा खोला बस्तीमा पसेका कारण सवारी साधन आवागमनमा समेत समस्या भएको छ ।
यता, सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ । शुक्रबार बिहान ६ बजेको मापनअनुसार पानीकाे बहाव १ लाख ७४ हजार ७ सय २० क्युसेक छ । बिहीबार साँझ भने कोसी ब्यारेजमा पानीको मात्रा १ लाख ६४ हजार क्युसेक थियो । अहिले कोसीमा ५६ वटा ढोकामध्ये २२ वटा ढोका खोलिएको छ । योसँगै अहिले ब्यारेजको कन्ट्रोल रुमले रातो बत्ती बालेको छ ।